Shiinaha Bovine Collagen Peptides warshad iyo alaableyda | Gelken
Kolajiin bovine oo leh culeys molikal ah oo ka yar 800 dalton, waa oligomer peptide, oo wax ka qabta jirka bini'aadamka ama maqaarka isla markaana leh soo-kabasho wanaagsan iyo soo-kabasho.
Collagen waxaa si dabiici ah looga soosaaray xayawaanka si loo sameeyo qurxinta afka ee culeyska culeyska yar yar ee kolajka kaas oo si fudud u nuugo jirka bini'aadamka, ka dibna loo isticmaalo dibedda sida maaskaro wajiga ama nuxurka. Iyadoo la adeegsanayo horumarka sayniska iyo tikniyoolajiyadda iyo hal-abuurnimada joogtada ah ee tikniyoolajiyadda kolajka ee waxyaabaha la isku qurxiyo ayaa marba marka ka sii dambeysa sii yaraanaya, oo marka uu yaraado culeyska meco kiciye ee badeecada, way fududaanaysaa in maqaarka aadamigu nuugo.Peptides-ka kolajka 'kolajka' waxay ku habboon tahay shuruudahan. Xiamen Gelken ayaa bixin kara peptides kolajiin bovine.
Kufsiga loo yaqaan 'Collagen peptide', oo inta badan laga soo saaro kalluunka, lo'da iyo doofaarrada, wuxuu leeyahay culeys ka yar unugyada 'collagen' ee si dabiici ah looga helo jirka dadka iyo xoolaha, waxaana si toos ah u nuugi kara jirka aadanaha.
Maraqeena doofaarka maalinlaha ah ee la kariyo, maqaarka hilibka, cagaha digaaga iyo wixii la mid ah waxay ka kooban yihiin kolajiin hodan ah, laakiin ma ahan maadada yar ee peptide-ka ah waxaan si toos ah u qaadan karnaa. Intaa waxaa dheer, daraasadaha ayaa sidoo kale tilmaamay in xaddiga isku-darka kolajka ee peptides-ka la nuugo ayaa ka sarreeya tan amino acids-ka bilaashka ah.
Daraasad la sameeyay ayaa lagu sheegay in heerarka kolajka ee jirka uu ugu sarreeyo marka uu gaaro 20 sano wuxuuna bilaabaa inuu yaraado sanad walba tan iyo xiligaas, xaddiga collagen-ka ayaa sii yaraanaya marba marka ka sii dambeysa.
Jidhkeenu waa cajiib. Waxay qaadan kartaa nafaqeeyayaalka yar yar iyo nafaqeeyayaalka yar yar, iyaga kala jabiya una adeegso dhismayaal dhisme u ah jir caafimaad qaba, sida kolajka. Saynis fara badan ayaa xaqiijisay in qaadashada maalinlaha ah ee peptides-ka kolajka ay kicin karaan wax soo saarka kolajka iyo hyaluronic acid, taasoo ka caawineysa hagaajinta dabacsanaanta maqaarka, jilicsanaanta iyo haynta qoyaanka asalka ah, isla mar ahaantaana yareysa daloolada.
Peptides-ka 'Collagen peptides' waxay caawiyaan xoojinta iyo dayactirka lakabka maqaarka ee hoose waxayna ilaaliyaan isku xirnaanta udhaxeysa shabakadaha fiber-ka ee collagen, kuwaas oo fure u ah kahortaga duuduubka maqaarka iyo foorarsiga.
Hore: Gelatin Hydrolyzed
Xiga: Kalluunka Collagen Peptides